Promo 9.9 Codashop Myanmar | September 2021
Home Promo 📢 📢 📢 ဆုလက်ဆေ...
📢 📢 📢 ဆုလက်ဆောင်များစွာ ကံထူးနိုင်မည့် Codashop ရဲ့ “9.9 အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်” လာပါပြီ!
(၉)လပိုင်း (၉)ရက်နေ့မှစတင်ကာ Codashop Myanmar တွင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာဂိမ်းအတွက် ၅,၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် ဝယ်ယူပြီး လေးပတ်တိတိ အပတ်စဥ်ဆုလက်ဆောင်များကံစမ်းနိုင်မည့် အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအစီအစဥ်သည် Codashop Myanmar တွင်ရှိသော ဂိမ်းအားလုံးနှင့် ငွေပေးချေမှုအားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။
ပထမအပတ်စဥ် => စက်တင်ဘာလ ၉ရက်နေ့မှ ၁၅ရက်နေ့အထိ
ဒုတိယအပတ်စဥ် => စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက်နေ့မှ ၂၂ရက်နေ့အထိ
တတိယအပတ်စဥ် => စက်တင်ဘာလ ၂၃ရက်နေ့မှ ၂၉ရက်နေ့အထိ
စတုတ္ထအပတ်စဥ် => စက်တင်ဘာလ ၃၀ရက်နေ့မှ အောက်တိုဘာလ ၆ရက်နေ့အထိ
ပထမအပတ်စဥ်: DXRacer Gaming Chair x (၁)ခု
ဒုတိယအပတ်စဥ်: HyperX Headphone (၃)ခု
တတိယအပတ်စဥ်: Logitech Gaming Mouse x (၄)ခု
စတုတ္ထအပတ်စဥ်: Samsung Galaxy A12 x (၁)ခု
ဒါ့အပြင် နှစ်သိမ့်ဆုအနေဖြင့် တစ်ပတ်မှာ လူ(၁၀)ယောက်ကို ဖုန်းဘေ(၅,၀၀၀)ကျပ်စီ မဲနှိုက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အထက်ပါပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း Codashop Myanmar တွင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာဂိမ်းအတွက် (၅,၀၀၀)ကျပ်ဖိုးနှင့်အထက်ဝယ်ယူပါ။ ငွေပေးချေရာတွင် Codashop Myanmar တွင်ရှိ‌သော ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ငွေပေးချေမှုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၂။ ငွေပေးချေရာတွင် အီးမေးလ်လိပ်စာကို မဖြစ်မနေ ထည့်ပေးရပါမည်။ အီးမေးလ်လိပ်စာထည့်သွင်းပြီး အောင်မြင်စွာဝယ်ယူထားသည့် ဝယ်ယူမှုများသာ ယခုအစီအစဥ်တွင် အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အီးမေးလ်လိပ်စာဖြည့်သွင်းပြီး (၅,၀၀၀)ကျပ်ဖိုးနှင့်အထက် အောင်မြင်စွာဝယ်ယူထားသော Transaction တစ်ခုစီအတွက် ကံစမ်းခွင့်ကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ သင်သည် ပထမအပတ်စဥ်ကာလအတွင်း Wild Rift အတွက် (၅,၀၀၀)ကျပ်ဖိုး၊ Free Fire အတွက် (၈,၀၀၀)ကျပ်ဖိုးစီ ဝယ်ယူလျှင် DXRacer Gaming Chair အတွက် ကံစမ်းခွင့် (၂)ကြိမ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၁။ ကံစမ်းထားသူများထဲမှ ကံထူးရှင်များကို Codashop Myanmar မှ အပတ်စဥ် မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
၂။ ကံထူးရှင်များကို Codashop Myanmar ၏ တရားဝင် ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာမှတဆင့် အပတ်စဥ် ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူရာတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည့်အီးမေးလ်လိပ်စာ (သို့) ဖုန်းနံပါတ်သို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ကံထူးရှင်သည် ကံထူးရှင်ကြေညာသောနေ့မှစပြီး နှစ်ပတ်အတွင်း ဆုလက်ဆောင်ပို့ဆောင်ပေးရမည့် နေရပ်လိပ်စာကို အကြောင်းပြန်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမပြန်ပါက ဆုလက်ဆောင်ကို ရုပ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၆။ Codashop သည် ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ရာတွင် ဆုံးရှုံးခြင်း (သို့) ပျက်စီးခြင်းအတွက်တာ၀န်ယူမည် မဟုတ်ပါ။
၂။ ယခုအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်နိုင်ရန် မည်သည့်အခကြေးငွေမှမလိုအပ်ပါ။ အထူးသတိပြုရမည့်အချက်မှာ Codashop Myanmar နှင့်တကွ ငွေပေးချေပေးမှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် အသုံးပြုသူများ၏ PIN (သို့မဟုတ်) OTP များကို မေးမြန်းခြင်းပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် တစ်စုံတစ်ဦးမှ မေးမြန်းလာပါက ဖြေကြားခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
၅။ Codashop Myanmar မှ ဝန်ထမ်းများ ယခုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်မရှိပါ။
၆။ အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာပါက Codashop Myanmar မှ အဆုံးအဖြတ်သာလျှင် အတည်ဖြစ်ပါသည်။
၇။ ယခု အစီအစဉ် နှင့်ပက်သက်သော စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကို Codashop Myanmar မှ လိုအပ်သလို အချိန်အရွေး ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်းများပြုလုပ်ခွင့်ရှိပါသည်။
၈။ ဝယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါက သို့ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုပါက Codashop Myanmar Facebook Messenger မှတဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
များများဝယ်လေ ဆုကြီးတွေ များများကံစမ်းနိုင်လေဆိုတော့ အခုပဲ ကြိုက်တဲ့ဂိမ်းအတွက် Codashop မှာ ဝယ်ပြီး အပါတ်စဥ် ဆုလက်ဆောင်တွေ ကံစမ်းလိုက်တော့နော်။
Previous article450 VALORANT Points ကံထူးဖို့ အရိပ်ကိုကြည့်ပြီး အေးဂျင့်နာမည်ခန့်မှန်းပါ
Next articleCodashop က Epic Skin အမိုက်စားနဲ့ နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းသွားပါပြီ!
Sudip November 11, 2021	At	9:03 pm
gave my old recharge receive date 2021.9.25
♥CEE♥ October 6, 2021	At	7:34 pm
I want to join,get skin or anything.Thank
♥CEE♥ October 6, 2021	At	7:32 pm